OxygenOS Open Beta 12 akwụsịla maka OnePlus 7 na 7 Pro | Gam akporosis
OxygenOS Open Beta 12 melite akwụsịla maka OnePlus 7 na 7 Pro
Fewbọchị ole na ole gara aga, e wepụtara ngwanrọ ngwanrọ ọhụrụ maka OnePlus 7 na 7 Pro. Nke a bịara dị ka OxygenOS Mepee Beta 12 ma ọ bịara na nnukwu ndozi arụmọrụ na mmezi dị iche iche, tinyere ihe ndị ọzọ.
Akụkọ ọjọọ nke ụlọ ọrụ ahụ, enwere ọtụtụ njehie na ngwungwu ngwa ngwa. N'ịbụ ndị doro anya, ndị ọrụ malitere ịme mkpesa, ọ bụ ezie na ọ bụghị ha niile, dị ka ụfọdụ kọrọ arụmọrụ nkịtị. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ahụ kpebiri iwepụ ya, yabụ mgbasa ya akwụsịla ma a napụrụ ya ugbu a.
OxygenOS Open Beta 12 abụrụla ọtụtụ fiasco. Enwere ọtụtụ OnePlus 7 na 7 Pro nkeji ejirila mmelite a gbochie. Ndị ọrụ ndị ọzọ na-eche nsogbu okwu ikpo ọkụ ihu mgbe ha na-akwụ ụgwọ, nkwụsị nke netwọk WiFi, na ndị ọzọ.
Dị ka ọnụ ụzọ Gizmochina Ọ pụtara ìhè, ma ọ bụrụ na ị na-eji OxygenOS Open Beta 12 na Onye OnePlus 7/7 dị iche iche na-enwe nsogbu, lNanị ụzọ ị ga-esi dozie ya bụ nrụpụta siri ike. Ndị ọrụ enweghị ike ịlaghachi na mbipute gara aga, nke bụ OxygenOS Open Beta 11. Ihe niile ha nwere ike ime bụ ichere ka ụlọ ọrụ ahụ hapụ ngwa ngwa.
Nke a bụ mgbanwe mgbanwe gọọmentị maka mmelite ahụ, ọ bụrụ na ị nwere mmasị.
Kachasị olu ntọala iji melite ahụmịhe onye ọrụ.
Gbakwunyere na-efu ndekọ na akara ngosi na ihuenyo oku
Ihe nchedo gam akporo emelitere na 2020.04
Okwu amara ama diri ma kwụsie ike sistemụ.
Agbakwunyere oge ringer maka oku azaghị
Ugbu a ị nwere ike ịgbanwe data mkpanaka gị na oku ekwentị dakọtara na VoLTE
Agbakwunyere atụmatụ nwere ike ịchọpụta unyi na igwefoto igwefoto, na-eme ka nhicha ngwa ngwa maka onyonyo ka mma na ogo vidiyo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » OxygenOS Open Beta 12 melite akwụsịla maka OnePlus 7 na 7 Pro
Blackview Spring Promotion na-enye ihe ruru $ 110 Ego na ekwentị ndị dị elu
Oppo A12 bụ mmefu ego ọhụụ ọhụrụ na Mediatek's Helio P35 chipset